Fotodrafitrasa ho an’ny baolina kitra: hamboarina hanara-penitra ny ” Kianja Barea” | NewsMada
Fotodrafitrasa ho an’ny baolina kitra: hamboarina hanara-penitra ny ” Kianja Barea”
Par Taratra sur 04/01/2020
Tsy honohono intsony fa hanomboka ny fanamboarana sy ny fanarenana ny kianjaben’i Mahamasina. Fotodrafitrasa maro ny hatsangana ao, hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena.
Hanomboka ny alatsinainy 6 janoary ho avy izao ny fanamboarana ny kianjaben’i Mahamasina. Orinasa sinoa, ny China State Construction Overseas Development (CSCOD), ny hisahana ny asa, haharitra 18 volana. 77 tapitrisa dolara ny tentimbidin’ny fanamboarana izay tetikasa malagasy 100 isan-jato ary vatsian’ny fitondrana fa tsy misy idiran’ny federasiona iraisam-pirenena, araka ny nambaran’Andriamanohisoa Gérard, mpanolotsaina manokan’ny filoham-pirenena, nitafa tamin’ny mpanao gazety, tetsy Antaninarenina omaly.
Hizara roa ny fanamboarana ka tapany voalohany ny fandrodanana ny “tribune centrale” sy ny “laterale” roa. Ezahina hovitaina mialoha ny 26 jona izany hahafahan’ny rehetra mankalaza ny faha-60 taona niverenan’ny Fahaleovantena malagasy. Hiova tanteraka ny endriny amin’izany, hisy rihana ambony, ka natokana ho an’ireo manampahefana ny ambany rihana. Hahatratra 15 336 ny isan’ny seza amin’ireo “gradin” vaovao ireo.
Ankoatra izay, tsy hokitihina ny “gradin” fa asiana seza hipetrahan’ny mpijery ka ampiana 9 704 ireo toerana 15 640 efa nisy teo aloha. Hisy laharana avokoa ireo seza rehetra ao anaty kianja.
Hisaraka tanteraka, araka izany, ny toeran’ny mpijery sy ny kianja ka tsy hisy intsony olona tafiditra eny amin’ny toeram-pilalaovana afa-tsy ireo mpilalao ihany.
Tsy hisy tamboho intsony manodidina ny kianja fa fefy miendrika ravinala, ahalalana an’i Madagasikara, ny ho hita ety ivelany, miaraka amin’ireo jiro maro isan-karazany. Ankoatra izay rehetra izay, hisy vahavahady miisa enina miditra ny kianja, izay mbola hisy varavarana 28 indray ao anatiny, hiakarana eny amin’ny “gradin”, arakaraka ny tapakilan’ny mpijery. Hahatratra 50 ny isan’ny toerana fivoahana.
Ho fitandroana ny fandriampahalemana, hisy “camera de surveillance” anatiny sy ivelan’ny kianja. Eo koa ny “tableaux electroniques” roa.
Tsy atao “synthétique” ny bozaka fa natoraly na “hybride” izay manaraka ny fenitry ny federasiona iraisam-pirenena. Efa misy ny fomba fanondrahana sy ny fikajiana ny ranon’orana tsy hihandrona eo amboniny, amin’ny fotoam-pahavaratra, mba hitazomana ny endriky ny bozaka tsy ho simba.
Hajarina ihany koa ireo birao sy ny toeram-panomanana isan-tsokajiny. Anisan’izany ny efitra ho an’ny federasiona, ny toerana fisoloan’ny mpilalao akanjo, ny toerana fakana aina, ny fanomanana vatana ary ny toerana voatokana ho an’ny mpanao gazety. Hisy toeram-pisakafoana sy fivarotana ao ambanin’ny “gradin”. Hisy koa toerana fandraisam-bahiny ao ambany “tribune”. Kendrena ho vita amin’ny volana jona 2021 ny asa fanamboarana ny kianjaben’i Mahamasina, izay ho lasa kianja Barea.